ခန္ဓာဗေဒ ဖတ်စာအုပ်တွေထက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကို ပိုပြီးပြောပြလိမ့်မယ့် X-ray (၁၈)ခု - Lifestyle Myanmar
in Technology, Unique Things
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စုံလင်တဲ့ယန္တရားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ် ၊ အိပ်ပျော်နေစဉ်နှင့် အားကစားလုပ်နေစဉ်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သွေးတွေ ပို့လွှတ်ပေးပြီး ဦးနှောက်က မနားမနေ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Wilhelm Röntgen ရဲ့တီထွင်မှုမပါဘဲ ဒီprocesses အားလုံးကို တွေ့မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀က သူဟာ လူတွေကို ထွင်းဖောက်မြင်ရစေတဲ့ ရောင်ခြည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မှာ သူ့ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနည်းပညာတွေ တိုးတတ်လာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ နေမကောင်းတာတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင် ရောဂါရှာဖွေဖို့အတွက် ၊ ရောဂါအတိအကျသိပြီး ဆေးကုသတဲ့နေရာမှာ ထိရောက်ဖို့အတွက် ဓါတ်မှန်ရိုက်တာ၊ CT scan ဖတ်တာ၊ MRI scan ဖတ်တာတွေ ပြုလုပ်လို့ရလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ Bright Side ကရွေးချယ် ဖော်ပြပေးထားတဲ့ MRI scans နဲ့ X-rays များစွာထဲကတဆင့် စိတ်ဝင်စားဖို့ အကောင်းဆုံးအရာတွေကို ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
၁။ မေ့မြောနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်နှင့် ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်
၂။ ဒါက မေးရိုးတစ်ခုကို မြင်ကွင်းကျယ် ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလူဟာ မျက်မှန်ချွတ်ဖို့ မေ့သွားပုံပါပဲ။
၃။ ၁၆လသားအရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ကာတွန်းဇာတ်ကောင် Spongebob ပုံစံဆွဲပြားလေးတစ်ခုကို မျိုချထားမိပုံပါ။
၄။ Tractography လို့ခေါ်တဲ့ အထူး MRI နည်းလမ်းဖြင့် ရိုက်ကူးထားပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ မတူညီတဲ့ နေရာတွေကို ချိတ်ဆက်နေသော အာရုံကြောအမျှင်ရဲ့ အစုအဝေးတွေကို ပြသထားတာပါ။
၅။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဓါတ်မှန်မှာ နှလုံးအစားထိုး (AbioCor နှလုံးတု) ထည့်သွင်းကုသထားတာကို ပြနေတဲ့ပုံပါ။
၆။ အမ်အာအိုင် စကင်နာတစ်ခုထဲမှာ ကလေးကိုချီထားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပုံပါ။
၇။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ CT-scan မရိုက်ခင် မိတ်ကပ်အများကြီး လိမ်းထားပုံရပါတယ်။ scan စက်ထဲမှာ မျက်တောင်ထူထူကြီးက အထင်းသားပေါ်နေပါတယ်။
၈။ ရွှေမျှင်တွေနဲ့ facelift လုပ်ခဲ့သူ လူနာတစ်ယောက်ရဲ့ ဓါတ်မှန်ပုံပါ။
၉။ တရားမဝင် အရာဝတ္တုတွေကို ပို့ဆောင်ခြင်းမှာ ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းဗိုက် ဧရိယာကို CT-scan ဖတ်ထားပုံပါ။
၁၀။ spectral scanner တစ်ခုနှင့် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဘေးကနေမြင်ရသော ခြေကျင်းဝတ်တစ်ခုရဲ့ ပုံပါ။
၁၁။ ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၄၁၀ ရှိသော လူနာတစ်ဦးရဲ့ ဓါတ်မှန်တစ်ခု။
၁၂။ အော်ပရာအဆိုတော် မိုက်ကယ်ဗိုလီဟာ Richard Wagnerရဲ့ Tannhäuser ကိုသီဆိုနေတဲ့ MRI ပုံပါ။
၁၃။ ဒါကတော့ အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်နှင့် cerebellum အစိတ်အပိုင်းဟာ အရွယ်အစား လျှော့နည်းသွားခဲ့တဲ့ ပုံပါ။
၁၄။ အမိဝမ်းထဲမှာ ကလေးလှည့်တဲ့ပုံပါ။
၁၅။ လက်ချောင်းထဲမှာ သွေးကြောတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါက လက်ကို ဓါးနည်းနည်း ရှမိရင်တောင် ဘာကြောင့် သွေးထွက်သလဲဆိုတာ ပြထားတာပါ။
၁၆။ (aorta) အေအော်တာက ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အကြီးမားဆုံး သွေးလွှတ်ကြော ဖြစ်ပါတယ်။
၁၇။ အပေါ်က ပုံက အသက် ၇နှစ်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွားဖြစ်ပြီး အောက်က ပုံကတော့ အသက် ၃၀ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွားပုံပါ။
Panoramic dental x-ray tooth’s of young man of 30 thirty and child of7seven years. Black and white image roentgen teeth upper and lower jaws of skull. The medical digital picture
၁၈။ တခါတရံမှာ ရေဒီယိုရောင်ခြည် အထူးကုတွေဟာ စကင်ဖတ်နေရတာ ငြီးငွေ့ပုံရလို့ ဟာသလုပ်ထားတဲ့ပုံပါ။
cosplayer လူနာတစ်ယောက် stormtrooper ဝတ်စုံတစ်ခုမှာ ညပ်မိနေပုံပါ၊ ဒါကတကယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်။
ဒါက ဓါတ်မှန်တစ်ခုမှာ Tony Stark ရဲ့ အသေးစားနျူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖို ဖြစ်ပါတယ်။